Talooyin yar oo loogu talagalay Khamaarka Thailand - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn Talooyin yar oo loogu talagalay Khamaarka Thailand
Bangkok waxaa lagu aqoonsaday xeebaha quruxda badan, dhaqanka muhiimka ah, caadooyinka, cunnooyinka kala duwan, meelaha lagu caweeyo ee waalan, iwm.
Haddii aad ka mid tahay shaqsiyaadka raadinaya Khamaarka Bangkok, waxaad u baahan tahay inaad ka warqabto xeerarka khamaarka magaalada iyo xaddidaadaha si aad uga fogaato isku -dhafka sharciga ah.
Sidee Saamaynta Khamaarka ee Thailand
Sida laga soo xigtay daraasad cusub, muwaadiniin badan oo reer Thailand ah ayaa sii wada ka -qaybgalka noocyada kala duwan ee khamaarka oo ay ku jiraan onlaynka Glubb. Si kastaba ha ahaatee, carruurta ugu yar ee ku nool bariga Yurub waa walaac.
Cilmi -baaris ku saabsan caadooyinka khamaarka ee Thailand ayaa yimid natiijadan. Iyo The Nation Thailand, cilmi baarista Thai waxaa diyaariyay Xarunta Cilmi baarista marka laga reebo Horumarinta Bulshada iyo Ganacsiga. Wadar ahaan 44,050 muwaadiniin Thai ah oo ka weyn 15 sano ayaa la baaray. Sida laga soo xigtay sahanka, dadka Thai waxay sharadkaan guud ahaan 30.42 milyan jeer.
Laga soo bilaabo cilmi -baaristii ugu horreysay ee CGS ee 2017, waxaa jiray 1.4 milyan oo khamaaris kordhay, taasoo keentay 57 boqolkiiba tirada guud. Tirooyinkan ayaa la barbardhigay kuwa Maraykanka. Sida lagu muujiyey Sahanka Qaranka ee 2017, 64% dadka Mareykanka ayaa qirtay Khamaarka sannadkii hore.
Boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ka mid ah dadka la wareystay ayaa sheegay in ay iibsadeen tigidhka Powerball-ka gobolka sannadkii hore. Wadar ahaan 26% ayaa booqday casino. Barkadda sharadka goobta shaqada ayaa waxaa isticmaalay ku dhawaad ​​15% ka qaybgalayaasha. 10% dadka ayaa ku khamaara ciyaaraha isboortiga.
Sida laga soo xigtay Illinois Foundation for Addiction Recovery, in ka badan 80% dadka Maraykanka ah ee da'doodu u dhaxayso 12 ilaa 17 ee la waraystay ayaa sheegay inay khamaarayeen 12kii bilood ee la soo dhaafay. In ka badan saddex meelood meel dadka khamaara ayaa sheegta inay sidaas sameeyaan ugu yaraan hal mar toddobaadkii.
Khamaarku maaha arrin!
Khamaaristu si dhakhso ah ayay uga baxsan kartaa xakamaynta iyada oo ay ugu wacan tahay isbeddel weyn ama cadaadis. Guul weyn ayaa laga yaabaa inay yeelato saameyn la mid ah. Khamaarka ayaa laga yaabaa inuu koro xitaa marka aysan jirin walwal gaar ah.
Dadku waxay had iyo jeer ogaadaan in si ay u qancaan, waa inay ku khamaaraan qaddar hantiyeed. Khamaarka ayaa waliba laga yaabaa inuu waxyeello u geysto xiriirka, shaqada, iyo maaliyadda iyadoo ay ugu wacan tahay dalabaadka oo kordhay waqtiga, dadaalka, iyo dakhliga.
Haddii adiga ama qof aad taqaan ay ka welwelsan yihiin Khamaarkooda, raadso caawimaad sida ugu dhaqsaha badan. Balwadda khamaarka ayaa laga yaabaa inay saamayso dadka dhammaan qaybaha nolosha. Ciyaartaadu waxay ka soo baxdaa maaweelo aan waxba galabsan oo u gudubta jahwareer halis ah oo leh waxyeelo weyn.
Caadada khamaarka ayaa dhaawici karta cilaaqaadka, tanaasuli karta shaqada, waxayna u horseedi kartaa burbur weyn, haddii aad ku qamaarato dhacdooyinka isboortiga, mashiinnada khamaarka, roulette, baccarat, ama boosaska casinos, meesha orodka, ama internetka. Xitaa waxaad samayn kartaa dabeecado aadan waligaa ku fikirin inaad sameyn doonto, sida deymo aad u badan ama lacag la lunsaday si aad u isticmaasho.
Sidee looga fogaadaa caadada xun ee Khamaarka?
Qabatinka ciyaaraha badan, caqabadda ugu adag ma aha joojinta Khamaarka ee waxay ku sii jirtaa soo kabashada-samaynta ballanqaad muddo dheer ah si looga fogaado ciyaaraha. Khamaarka ayaa noqday mid aad loo heli karo iyada oo loo mahadcelinayo Shabakadda, taas oo adkeyneysa dadka qabatimay inay ka hortagaan soo noqoshada.
Qof kasta oo haysta taleefan casri ah ama internet ayaa laga yaabaa inuu ka ciyaaro casinos -ka internetka iyo kuwa buug -sameeyaha ah 24 saac maalintii, toddoba maalmood toddobaadkii.
Si kastaba ha ahaatee, xalka joogtada ah ee caadada khamaarka ama khamaarka dhibaatada ayaa weli ah mid la gaari karo haddii aad ku lug yeelato dad la aamini karo, iska ilaali inaad soo jiidato hareeraha iyo mareegaha, ka tanaasusho xakamaynta maaliyaddaada (ugu yaraan si ku -meel -gaar ah), oo aad Khamriga ku kabo hiwaayado caafimaad leh noloshaada.
Wax ka qabashada caadada khamaarka marna ma fududa, helidda caawimaad xirfadeed micnaheedu ma aha inaad daciif tahay ama aadan awoodin inaad wax ka qabato arrimahaaga.
Laakiin waxaa muhiim ah in la xusuusto in hadda qof kasta oo khamaarle ah uu ka duwan yahay, markaa waxaad u baahan doontaa xarun dhaqan -celin oo ku habboon shuruudahaaga iyo duruufahaaga.
10ka fikradood ee khaldan ee ugu sareeya ee ku saabsan hantida
Marka loo eego qaamuuska Collins, hantida waxaa lagu qeexi karaa haysashada lacag badan, hanti,…
Ganacsi kasta oo diiwaangashan wuxuu leeyahay waajibaad dastuuri ah inuu bixiyo canshuurta. Meherad kasta oo diiwaangashan waxaa loo xilsaaray Aqoonsiga Canshuurta…
13 Kaararka Amaahda Dukaan ee ugu Fiican 2021
Inaad noqoto dukaanle wanaagsan waa farshaxan, qaybna waa ogaanshaha sida ugu badan ee loo helo…
10 Arooska Ugu Qaalisan Aduunka 2022
Weligeed ma meher aan qaali ahayn baa dhacay? Waxaa laga yaabaa inaysan qiimo qaali ah ku fadhiyin laakiin kaalay, aroosyada waa…